Yenzeka kanjani i-tsunami | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ama-tsunami ayizimo okungabhubhisa Iyakwazi ukubeka udoti emadolobheni wonke asogwini ngemizuzu embalwa. Ziluchungechunge lwamagagasi akhiqizwa olwandle njengomphumela wokuzamazama komhlaba, ukudilika komhlaba, ukuqhuma kwentaba-mlilo noma umthelela we-asteroid.
Uma ufuna ukwazi kwenzeka kanjani ama-tsunamiNgemuva kwalokho ngizochaza ngokuningiliziwe konke okuphathelene nalezi zimo.
1 Ayini ama-tsunami?
2 Akhiqizwa kanjani?
Labo abathanda ukuntweza phezu kwamanzi bahlala befuna igagasi elihle kakhulu lokuthi "banqobe", bejabulela ulwandle nezimo zalo. Kodwa-ke, i-tsunami ayiwona umdlalo. Lesi simo singabulala kalula abantu abayishumi nambili njengaleso esenzeka ngo-2004 e-Indian Ocean, sabangela ukufa kuka Abantu abangu-436.983.
Amagagasi alezi zimo angalinganisa kalula ngaphezu kwe- 100km ubude, ukuphakama okungafika kumamitha angama-30, futhi uhambe ngesivinini esingu-700km / hNgakho-ke kufanele ubaleke kubo ngokushesha okukhulu.
Njengoba sishilo, zingakhiqizwa ngezindlela eziningana:
Ukuzamazama komhlaba ngaphansi kwamanzi: lokhu kunyakaza kokuzamazama komhlaba kudalwa ukuhamba kwamapuleti we-tectonic eMhlabeni. Ngokwenza njalo, amanzi angaphezulu aphakama futhi awe ngenxa yokuzamazama komhlaba uqobo namandla adonsela phansi. Okwamanje, amanzi ahamba ezama ukufinyelela endaweni ezinzile.
Ukuguguleka komhlaba kwasolwandleAma-tsunami nawo angakhiqizwa ngenxa yokudamba kolwandle.
Ukuqhuma kwentaba-mlilo engaphansi kwamanzi: Izintaba-mlilo ezingaphansi kwamanzi zingakhiqiza amandla anele ukudala ikholomu enkulu yamanzi ezoveza lezi zenzakalo.
Imithelela ye-AsteroidLawa matshe amakhulu, ngenhlanhla afinyelela iplanethi okuncane kakhulu, aphazamisa amanzi angaphezulu. Amandla anjengokuthi angakhiqiza ama-tsunami amakhulu.
Sithemba ukuthi ufunde kabanzi ngalezi zenzakalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Yenzeka kanjani i-tsunami